HomeArimaha QoyskaWaa Maxay Sababta Ay Dumarku Uga Cabsadaan Ragga Aamusan?
Dumarka ayaa ka cabsada in ay wax xidhiidh ah la sameeyaan Ragga Aamusan iyaga oo aan Fahmin sidoo kale Ninka Aamusan ayaa ah mid aan la fahim karin waxa uu la aamusan yahay.
Ninka Aamusan gabadha ayaan ku dareemin Raaxo sababta oo ah waxa ay ogtahay in uuna Ninka Aamusan soo bandhigin wajigiisa dhabta ah.
Hadaba waxa an Halkan ku soo bandhigi donaa 5 Sabab Oo Ay Dumarku Uga Cabsadaan Ragga Aamusan:
1.In Ayna Wax Aamaan Ah Ku Dareemayn:
Ninka Aamusan ayayna Gabadhu saadaalin karin waxa uu qalbiga ku hayo maadama uuna hadlayn hadii ay tahay in uu ka hadlo wixii horay u soo maray sidaas darteed gabadha ayaan Amaan ku dareemayn Ninka Aamusan.
2.In Uuna Si Cad U Hadlin:
Ninka Aamusan ayaan ahayn Nin si cad u hadal Gabadhuna ma garanayso waxa uu doonayo ama waxa jira qalbigiisa waana mid ayna gabi ahaan gabadhu fahmi karin.
3.In Ayna Agtiisa Ku Dareemin Daganaan:
Ninka Aamusan ayaan ahayn Nin dagan waxana ay arintaas saamaynaysaa gabadha waxa lagu qiyaasi karaa sida Bada maadama aan la garan karin wakhtiga ay Biyadaha badu kici karaan sidaas darteed gabadha ayaa dareemaysa baqdin.
4.Waa Mid Aan La Fahmi Karin Fal Celis-kiisa:
Ninka Aamusan waa Mid aan la fahmi karin fal celiskiisa waana mid aan la fahmi karin waxa uu la faraxsan yahay ama la Murugsanyahy sidaas darteed gabadha way ku adagtahay in ay fahamto fal celiskiisa.
5.In Ay Agtiisa ku Kalinimo Ku Dareento:
Ninka Aamusan ayaa doorbida in uuna Hadalin sidaas darteed gabadha ayaa dareenta Kalinimo marka ay isaga la joogto maadama uuna fiicnayn in uu in badan hadlo taas oo keenaysa in ay dareento kalinimo taas oo keenta in ay ka cabsato in ay xidhiidh la samayso.